Sheekada filimka Batti Gul Meter Chalu: Filim dhex dhexaad ah oo halmar la daawan karo – Filimside.net
Sheekada filimka Batti Gul Meter Chalu: Filim dhex dhexaad ah oo halmar la daawan karo
September 21, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: September 21, 2018
Director Shree Narayan Singh oo sanadkii hore sameeyay filimka Super Hit-ka noqday TOILET – EK PREM KATHA wuxuu markaan la yimid filim kale oo fariin arimo bulsho xambaarsan laguna magacaabo BATTI GUL METER CHALU wuxuuna mashruucaan ka hadlayaa dhibaatada ay bulshada dabaqada dhexe iyo hoose Hindiga ah ku qabaan helista adeeg koronto oo dhameestiran sidoo kalena qiimo jaban.
Jilaayaasha filimkan: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Yami Gautam, Divyendu Sharma,, Farida Jalal iyo kuwo kale.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimkan: Fariintiisa waaqiciga ah waa mid la aqbali karo sidoo kalena halka saac hore waa heer sare una dheer tahay bandhiga quruxda badan ee Shahid Kapoor iyo Shraddha Kapoor sameeyeen.
Muxuu Ku Liitaa Filimkan: Halka saac dambe si wacan looma dhigin sheekadiisa sidoo kalena jaceylka lagu dhex lifaaqay sheekadan arimaha bulshada ku saabsan waa mid dafiic ah.
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 43-daqiiqo
Fariinta Filimka BATTI GUL METER CHALU Oo Kooban: Sushil Kumar Pant aka SK (Shahid Kapoor), Lalita Nautiyal aka Nauti (Shraddha Kapoor) iyo Sundar Mohan Tripathi (Divyenndu) waa sedex saaxiibo oo aad isugu dhow waxayna ku wada nool yihiin deegaanka Tehri ee Uttarakhand ka tirsan.
SK (Shahid) waa abuukaate oo jecel si dhaqsi ah inuu lacag ku helo asigoo dadka rakaato geliyo ama xeelado kale adeegsado si uu macmiiladiisa lacag kaga helo.
Nauti (Shraddha Kapoor) iyadana dukaan lagu iibiyo dharka iyo waxyaabaha dumarka isku xiryaan ayay leedahay waxayna ku riyootaa inay noqoto naqshadeeye caan ah.
Dhinaca kale Sundar Mohan Tripathi (Divyenndu) waa wiil iska dagan dhawaana wuxuu furtay warshad alaabta soo saarto sidoo kalena xir xirto.
SK (Shahid) iyo Sundar Mohan Tripathi (Divyenndu) labaduba waxay ka siman yihiin dareen gaar ah inay qalbiga ugu hayaan Nauti (Shraddha), waxayna Nauti (Shraddha) go’aan ku gaareysaa labadaan wiil inay isla shukaansato waxayna go’aan ku gaareen ugu dambeyntii midka ay dooran laheyd labadan wiil ee guursan doono.
Marka kowaad Nauti (Shraddha) waxay waqti la qaadaneysaa SK (Shahid) waqti wacana wey la qaadanee jaceylkana wuxuu yahay ayuu dareensiinaa.
Sidoo kale Nauti (Shraddha) waxay waqti la qaadaneysaa Sundar Mohan Tripathi (Divyenndu) laakiin waxay u arkee inuusan jaceylkeeda dhabta ah noqon karin waqtina wey iskala qaadataa balse SK (Shahid) ayaa maalin arkaayo labadan oo waqti isla qaadanayo wuuna ka caroonayaa asigoo go’aan ku gaarayo inuu isaga tago magaalada oo dhan wuxuuna u guuraa Mussoorie.
Dhinaca kale Sundar Mohan Tripathi (Divyenndu) wuxuu culees kala kulmayaa shirkad koronto oo gaar loo leeyahay ayadoo kusoo eedeneyso inuu bixiyo 54 Lakh oo ah qarash koronto shirkadiisa adeegsatay wuxuuna sameenaa dadaal walbo oo dhanka sharciga ku aadan si shirkadaha korontada dadka dhiig miirtaan looga qabto.
Nasiib xumo Sundar Mohan Tripathi (Divyenndu) adeegii koronto ayaa laga jaranaa warshadiisa wuxuuna bilaabaa inu adeegsado matoor waxayna ku noqonee culees dhaqaale uusan xamili karin wuxuuna go’aan ku gaaraa dhulka weyn ee awoowayaashiisa dhaxal ahaan kaga tageen iyo warshadiisa inuu iska iibiyo.
Balse inta uusan Sundar Mohan Tripathi (Divyenndu) tilaabadaas qaadin wuxuu caawinaad weydiisanaa saaxiibkiisii hore SK (Shahid) oo abuukaate ah.
Laakiin SK (Shahid) waa nin maseersan oo ciil haayo wuxuuna diidaa inuu Sundar Mohan Tripathi (Divyenndu) garab siiyo asigoo weli ka xanaaqsan in saaxiibtiisii Nauti (Shraddha) wiilkan ka dooratay sida uu isaga u maleeyo.
Sundar Mohan Tripathi (Divyenndu) haddiiba saaxiibkiis inuu garab siiyo diiday meel walbana culees ka saaran yahay wuxuu go’aan ku gaaraa inuu nafta is dhaafsiiyo ama is dal dalo!!!
Filimkan waxaa qaybihiisa dambe loo daawan doonaa SK (Shahid Kapoor) go’aanka uu qaadan doono marka uu maqlo in saaxiibkiis is dal dalay iyo sida uu cadaalada ugu dagaalami doono dadka kale ee shirkadaha korontada dhiig miirtaan si dad kale berito sida saaxiibkiis oo kale aysan isku dilin!!
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan: Qoraayaasha filimkan Siddharth-Garima iyo Vipul Rawal fikrad wacan ayay la imaadeen oo halka saac hore si qurux badan kuu soo jiidaneyso laakiin qoraalka qabyo ayay kaga tageen madaama ay moodeen in sheekada halkaas ku egtahay waayo halka saac dambe lama adkeyn nuxur muuqdana looma yeelin.
Sidoo kale Shree Narayan Singh qaabka uu sheekada u dhigay iyadana meelaha qaar wey wacan tahay agaasin ahaan laakiin sheekada filimkan waxay ku xasuusinee ama u yara egtahay Akshay Kumar filimkiisii Jolly LLB 2 meelaha qaar waa ceeb kale oo kooxdan ku dhacday.
Maxaa Wanaagsaneyd In La Sameeyo: Waxaa aad u fiicneyd in filimkan BATTI GUL METER CHALU waqtigiisa 161-daqiiqo ah in ugu yaraan 30-daqiiqo laga jaro waayo halka saac dambe habacsanaan badan ayaa ka muuqato.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkan: Shahid Kapoor ayaa ah waxa ugu weyn ee filimkan loo daawan karo inaba caadi ma ahan doorkan adag uu qaatay oo labo waji kala duwan leh marna jaceyl ayuu matalayaa, marna shactiro marna abuukaate doonayo qaladkii uu galay inuu dib u saxo dadkana xaqooqada usoo celiyo.
Shraddha Kapoor marnaba kuma niyad jebineyso waxayna u tahay filimkan furo muhiim ah madaama dhacdooyinka ugu muhiimsan iyada quseeyaan ama la xariiraan si wacan ayayna Shahid isugu soo baxayaan.
Divyenndu door qurux badan ayuu qaatay asigoo shaashada la qeebsaday Shahid iyo Shraddha halka saac ee hore wuuna ka baxsaday kaalintiisa.
Atirishada Yami Gautam xili dambe ayay filimkan soo galeysaa waana niyad jab kale madaama la islahaa door adag ayay ku leedahay balse doorkeeda ma xumo ayadoo qareen ama abuukaate mataleyso.
Gunaanad: BATTI GUL METER CHALU waa filim sheekadiisa fariin ahaan dhex dhexaad tahay oo halmar la daawan karo fiicnaan laheydaa in sheekadiisa waqti ahaan la yareeyo sidoo kalena halka saac xiisaha badan lagu kubo ugu yaraan nusaac adag laakiin midaas ma dhicin. Dhinaca Boxoffice-ka filimkan wuxuu u baahan yahay hadal heyn wanaagsan si uu ganacsi lixaad leh u sameeyo balse midaas ma muuqato hadal heyntiisa waa dhex dhexaad ah taasi waxay sababi kartaa ganacsi dhex dhexaad ah inuu sameeyo.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka BATTI GUL METER CHALU waxaana leenahay nasiib wacan kooxda filimkan dadaalka sameesay: